Kube nezindatshana eziningi ohambweni lomthengi kule minyaka embalwa edlule nokuthi amabhizinisi adinga kanjani ukuguqulwa ngamadijithali ukwamukela izinguquko ekuziphatheni komthengi. Izigaba umthengi ahamba kuzo ziyisici esibucayi secebo lakho lokuthengisa nokumaketha ukuze uqinisekise ukuthi unikezela ngolwazi kumathemba noma kumakhasimende ukuthi alufuna nini futhi nini.
Isixazululo Ukuhlola - manje ibhizinisi seliqonda inkinga yalo, manje kufanele bafune isisombululo. Yilapho ukukhangisa, ukusesha, kanye nemithombo yezokuxhumana ibaluleke kakhulu enhlanganweni yakho. Kufanele ubekhona ekuseshweni ngokuqukethwe okumangazayo okuzohlinzeka ukuzethemba okudingwa ithemba lakho lokuthi uyisixazululo esisebenzayo. Kufanele futhi ube neqembu lokuthengisa elisebenzayo kanye nabameli abakhona lapho amathemba akho namakhasimende wakho ecela imininingwane ezinkundleni zokuxhumana.
Izidingo Zokwakha - ibhizinisi lakho akufanele lilinde isicelo sesiphakamiso ukuze sichaze kabanzi ukuthi usiza kanjani ukufeza izidingo zabo. Uma ungasiza amathemba akho namakhasimende akho abhale izidingo zawo, ungaya phambili komncintiswano wakho ngokugqamisa amandla nezinzuzo ezengeziwe zokusebenza nenhlangano yakho. Le yindawo engihlale ngigxile kuyo kumakhasimende esiwasizile. Uma wenza umsebenzi onzima wokubasiza ukuthi bakhe uhlu lokuhlola, baqonde imigqa yesikhathi, futhi balinganise umthelela wesisombululo, uzolandelwa masishane enhlokweni yohlu lwezixazululo.
Ukukhethwa Kwabahlinzeki - Iwebhusayithi yakho, ubukhona bakho bokusesha, ubukhona bakho bezokuxhumana nabantu, ubufakazi bamakhasimende akho, amacala akho wokusebenzisa, ukubonakala kobuholi bakho bokucabanga, izitifiketi zakho, izinsizakusebenza zakho, nokwaziwa komkhakha konke kuyasiza ekwenzeni ithemba lakho likhululeke ukuthi uyinkampani leyo bafisa ukwenza ibhizinisi nabo. Inkampani yakho yezobudlelwano nomphakathi idinga ukuba phezulu ekuqinisekiseni ukuthi ukhulunywa njalo ezincwadini zomkhakha njengomhlinzeki owaziwayo wemikhiqizo nezinsizakalo abathengi abacwaninga abahlinzeki ngazo. Abathengi bebhizinisi bangahamba nesixazululo esingafiki kuwo wonke ama-checkmark… kepha bazi ukuthi bangathemba. Lesi yisigaba esibucayi seqembu lakho lokumaketha.
Ukudalwa Kokuvumelana - Ebhizinisini, akuvamile ukuthi sisebenzisane nomenzi wezinqumo. Kaningi kunalokho, isinqumo sokuthenga sishiyelwa ekuvumelaneni yithimba lobuholi bese sivunywa. Ngeshwa, imvamisa asikwazi ukufinyelela kulo lonke iqembu. Abamele abathengisayo abavuthiwe bakuqonda kahle lokhu futhi bangaqeqesha ilungu leqembu ukuthi lisethule kanjani isisombululo sabo, bahlukanise ibhizinisi labo kulo mncintiswano, futhi basize iqembu lidlule kwinqubo yokuvunywa.
Lezi zigaba azihlali zisebenza ngokulandelana. Amabhizinisi ajwayele ukusebenza ngesigaba esisodwa noma eziningi, aguqule izidingo zawo, noma anwebe noma anciphise ukugxila kwawo njengoba eqhubekela phambili ekuthengeni. Ukuqinisekisa ukuthi ukuthengisa kwakho nokumaketha kuhambisana futhi kuvumelana nezimo ukwamukela lezo zinguquko kubalulekile empumelelweni yakho.
Abathengisi abaningi be-B2B bakhawulela ukuvezwa kwenkampani yabo kulabo abazoba ngamakhasimende abo ngokugxila ekubonakaleni kwabo kokutholakala njengomthengisi onganikeza umkhiqizo noma insizakalo. Kuyisu elikhawulelayo ngoba abekho ekuqaleni komjikelezo wokuthenga.
Ngalesi sikhathi, bekungeke yini kube mnandi uma ibhizinisi lakho - elenza ukuhlanganiswa okuyinkimbinkimbi kwezinkampani zeFintech belikhona ekubasizeni baqonde ubunzima benkinga? Impendulo elula ukuthi Yebo. Akusilo ithuba lokuphakamisa izixazululo zakho (okwamanje), kumane kungukunikeza umhlahlandlela kubo ukuze ubasize baphumelele emsebenzini wabo nasembonini yabo.
Ilabhulali yakho yokuqukethwe kufanele ihleleke kahle, isesheke kalula, ibhalwe uphawu olufanayo, ibhalwe ngokufishane, ibe nocwaningo olusekelayo, itholakale kuma-mediums (umbhalo, isithombe, ividiyo), iningi lenzelwe iselula, futhi likhombe ukuhlobana nabathengi obakhona ukufuna.
Inhloso ephelele yemizamo yakho yokumaketha kufanele kube ukuthi umthengi wakho angaqhubekela phambili ngendlela abengathanda ngayo ohambweni lomthengi ngaphandle kwesidingo sokuxhumana nenkampani yakho. Amathemba azofuna ukudlula kulezi zigaba ngaphandle kosizo lwabasebenzi bakho. Ngenkathi ukwethula abasebenzi bakho ngaphambi kwezigaba kungasiza, akuhlali kunokwenzeka.